SXSW 2014 အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော Infographic Wrapup | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 18, 2014 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Jenn Lisak Golding
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Meltwater's နှင့်ပတ်သက်ပြီးအေးမြသည့်အရာတစ်ခု လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့် software ကို စိတ်ဓာတ်နှင့်လူကြိုက်များမှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အတွက်အကြောင်းအရာများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုသေသေချာချာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့စတင်ခဲ့တယ် SXSW န်းကျင် buzz စောင့်ကြည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် -
NSA သတင်းပေးသူအက်ဒွပ်စနိုးဒန်သည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဘက်စုံ၏ ၇% သည်စနိုးဒင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အမျိုးသားများကလူမှုရေးကိုပိုမိုတင်ခဲ့သည် - ၆၂% နှင့် ၃၈% သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
Justin Bieber တွင် Grumpy Cat ထက် ၄၀၀% ပိုဖော်ပြသည်။ (whaaaa ပြောပါ?)
အေးမြသည့်အချက်အလက်များအားလုံးအတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာ Meltwater's ကိုစစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့် လူမှုရေးမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများ.
ယောဟနျသ Moore က
မတ်လ 18, 2014 မှာ 11: 55 AM
ဂီတအသစ် သို့မဟုတ် နည်းပညာသစ်အကြောင်း သိပ်မပြောပါ။ SXSW3၏ ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်အပျက် (အသက် 2014 ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်) အကြောင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းကို မတွေ့ရတော့ပါ။ အလွန်ပြောပြပါသည်။
မတ်လ 18, 2014 မှာ 3: 11 pm တွင်
ဟေးဂျွန်- မေးခွန်းကောင်းများ။ ကျွန်တော် ဒီ infographic ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် အဖြေပေးပါမယ်- မတ်လ7မှ 11 ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ညီလာခံရဲ့ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအပိုင်းကို အထူးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့ကြောင့် မတ်လ 12 ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြောက်စရာကောင်းသော မတော်တဆမှုအား ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ဤအချိန်ဘောင်အတွင်း နည်းပညာအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများများပြောစရာမရှိသည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါသည်။ ပြီးတော့ အဲဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ဆိုးမဖြစ်ခင် ၂ ရက်အလိုမှာ မြစ်နီမှာရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ အဲဒီ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူတိုင်းအတွက် ကျွန်တော့်နှလုံးသားက ထွက်လာတယ်။